Baie de Narinda: Hanaovana port sy aéroport lehibe, nouvelle ville, Nosy lava atao Nosy fizahan-tany
mercredi, 09 mai 2018 12:00
Tafiditra ao anatin'ny tetikasa Vitatsika io, ny fanamboarana seranan-tsambo lehibe eo andrefan'ny Madagasikara, faritra Analalava, andrefan'Antsohihy.
Lehibe tokoa io helodrano natoraly io, lalina ary tsy manonja ny ranomasina. Mirefy 10km ny sakan'io Helodrano na Baie de Narinda io, ary 68Km ny halavany, lalina tokoa ny rano ka afaka hidiran'ny sambo vaventy.
Anaovana zone de stockage off-short na toerana fametrahana entana tsy andoavana haba eo akaiky eo, izay toerana andalovan'ilay autoroute de l'Unité Nationale manodidina an'i Madagasikara.
Asiana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena, handray ireo manandrahara eo amin'ny port, sy hampifandray ny andrefan'ny Nosy amin'ny Afrika sy ny tany arabo, ary Amerika. Varavarana mitodika any andrefan'izao tontolo izao izany, na ny seranan-tsambo lehibe, na ny seranam-piaramanidina.
Anaovana Tanàna vaovao na nouvelle ville, ka hisy trano moderina 50 000 hatsangana ao. Hisy ny jiro sy rano, hisy internet, hisy hopitaly, sekoly, toeram-pihofanana ambony momba ny resaka sambo, ranomasina, hisy régiment militaire sy marin ary aérien. Hiantsona ao ilay Mirage na F16 miisa 2 amin'ilay 6 ho vidiana hanaramaso ny ranomasina sy ny sisintanitsika.
Hiteraka asa marobe izy io satria dia hifamezivezy ny entana sy ny vokatra. Asiana hotely lehibe maro satria ireo mpizaha-tany dia ho feno avy amin'ireny paquebot na sambo vaventy mpitondra olona ireny, ireo tatsambo na marin, ary ireo mpanafatra na mpanondrana entana.
Ny sambo rehetra, na mpitondra solika, na mpitondra entana aty amin'ny faritry ny lakandranon'ny mozambika izany dia afaka hiantsona eo avokoa, jerena ny ananan'ny Secren tanjaka ka ho afaka hisy ny fikolokoloina irey sambo mila izany eo an-toerana.
Asiana fambolena goavana sy fiompiana ihany koa amin'iny faritra iny, hamatsy ireo olona marobe ireo, ary azo avy hatrany dia anaovana indostria ka ahondrana ho an'ny Afrika na Arabie Saoudite, Dubaï sy ireo tany arabo rehetra ireo ny ambim-bokatra tsy lany eto an-toerana.
Nosy lava eo akaiky eo kosa dia atao Nosy hisarihana mpizahatany, ka asiana seranam-piramanidina sy hotely lehibe fandraisana mpizaha-tany. Esorina ao ireo gadra, izay efa tsy dia misy akory aza izany amin'izao fa atao vakoka ilay toerana nisy azy ireo teo aloha.
Tafiditra ao anatin'ny Faritra avaratra izany ity seranan-tsambo sy seranam-piaramanidina lehibe ity, raha ao Toamasina ny an'ny Faritra afovoany, ary Tolagnaro ny an'ny Faritra atsimo.
Famatsiam-bola anamboarana azy?
Vinaniana andaniana 5 milliards de dollar eo ireo foto-drafitrasa lehibe ireo, seranan-tsambo, seranam-piaramanidina, zone de stockage, hotelerie, nouvelle ville 50 000 logements, centre de formation, hôpital, école, ankoatran'ny autoroute sy ny lalana izay tetikasa hafa no mamatsy ara-bola azy.
Ny Fanjakana foibe, ny Faritra, ny Kaominina dia mihazona ny 51% n'ny petra-bola. Ny redevance pêche, na ireo vola miditra amin'ny vokatry ny ranomasina, pétrole izay mahatratra 10 milliards de dollars isan-taona raha voafehy ny kolikoly no akan'ny Fanjakana 3 milliards de dollars hamatsiana ity tetikasa goavana ity.
Misokatra amin'ny Malagasy rehetra ny petra-bola amin'io. Ireo mpandraharaha te handray anjara amin'ny tetikasa, na ny seranan-tsambo, na seranam-piaramanidina, na ny nouvelle ville, dia misy petra-bola apetraky ny fanjakana amin'ny Banky Malagasy izay ajorony, ho fiandry ho an'ireo izay hitrosa amin'ny zana-bola tsy mihoatra ny 5%/an. Ka izay no amatsy ny 30% n'ny tetikasa.
Misokatra amin'ireo mpanam-bola vahiny kosa ny 20% n'ny vola ampiasaina ao.